DHOOFINTA SHUKULAATADA UKRAINE AYAA HOOS U DHACDAY 2016 - UKRAINE
Dhoofinta shukulaatada Ukraine ayaa hoos u dhacday 2016
Abuuritaanka alaabta shukulaatada ee Ukraine ayaa sanadkii hore hoos u dhacday 6% - ilaa 170.4 kun tan. Sida laga soo xigtay Adeegga Tirakoobka Qaranka ee Ukraine, sannadka 2015, 181.7 kun oo ton oo shoolaato ah, foornada iyo macmacaanka ayaa la sameeyey. Sababtoo ah lumista suuqa Suuqa Ruushka oo ah iibsadaha ugu weyn ee shukulaatada ka soo baxa soo saarayaasha Ukraine, sannadka 2016 dhererka dhoofinta shukulaatada ayaa hoos u dhacay.
Intaa waxaa dheer, lumitaanka suuqa Suuqa Ruushku waxa ay saameyn xun ku yeelatay horumarinta alaabooyinka gobollada Dhexe ee Aasiya hore ee Midowga Soofiyeeti, iyada oo tareenka loo sii marayo Federaalka Ruushka la xannibay. Sidaa darteed, sida laga soo xigtay Guddiga Tirakoobka Gobolka, 11 bilood ee sannadka 2016, soo saarayaasha Ukraine ayaa iibsaday 50.7 milyan oo ton oo shukulaato ah, oo ah 13.9% ka yar sanad ka hor. Sanadka 2015, dhoofinta waxaa lagu qiyaasey 58.9 kun oo ton oo ah qiyaasta 139.8 milyan oo doolar.
Haddii aad eegto joqraafiyada sahayda, markaa macaamiisha ugu muhiimsan ee cunnooyinka jarmalka sannadkii hore waxa uu ahaa Kazakhstan, taas oo 17.5% dhammaan gawaarida lagu sameeyay shuruudaha lacagta.
Dalalka dhoofiya Shukulaatada Ukraine ee 2016 waa:
1. Kazakhstan (2,350,000 dollars)
2. Belarus (11,200,000 doolar)
3. Georgia ($ 11.2 milyan)
4. Dalalka kale (88,100,000 doolar)
Poland ayaa noqotay waddanka ugu horreeya ee soo saaro shukulaatada Ukraine ee shuruudaha lacagta. Waxay ka dhigan tahay 36.8% dhammaan badeecooyinka. Ogsoonow in sanadka 2015 Ruushka Federaalku wuxuu ahaa kan ugu xiisaha leh dalalka soo dejiya (36.68%).
Dalalka soo dejiya shukulaatada ee Ukraine ee 2016:
1. Poland ($ 25,900,000)
2. Holland ($ 11,300,000)
3. Jarmalka ($ 11 milyan)
4. Dalalka kale ($ 22.1 milyan)